Ny iPhone 13 dia manana 512GB | Vaovao IPhone
Araka ny TrendForce, ireo maodely iPhone 13 vaovao hatombok'i Apple amin'ny volana septambra ho avy izao hahatratra hatramin'ny 512 GB fitehirizana anatiny. Mampitandrina ity orinasam-pikarohana Taiwanese ity fa mikasa ny hanangana ireo maodely iPhone vaovao amin'ny volana septambra ny orinasa Cupertino, manampy mini iPhone, iPhone ary maodely iPhone Pro roa tahaka ny an'ny iPhone 12 anio.
Saingy ankoatry ny fijanonana amin'izany, izay nohazavain'i TrendForce sy izay nozarain'ny media hafa toa MacRumors, dia ireo modely iPhone vaovao ireo izay hanampy kely kely kokoa, hampiditra ny Ireo mpikirakira A15 manaraka dia vita amin'ny fizotran'ny 5-nanometer ary ireo maodely pro dia hampiditra amin'ny fomba ofisialy ny tahan'ny famelomana 120Hz ho an'ny fampisehoana azy ireo ihany koa.
Betsaka ny tsaho milaza fa ny maodely iPhone manaraka dia hitondra fanovana vitsivitsy raha oharina amin'ny maodely ankehitriny, fa ny sasany kosa miavaka amin'ny sisa amin'ireo fitaovana finday natomboky ny orinasa Cupertino.
Ny scanner LiDAR dia toa hijanona ho an'ny modely Pro ihany koa amin'ity taranaka ho avy ity ary koa tsy hampitombo ny fahafaha-manana faratampony izay efa ananan'ny iPhone 12 ankehitriny, 512 GB. Ho an'ireo maodely Pro vaovao avy amin'ity fitaovana ity dia nanambara ihany koa izy ireo fa ny solomaso Ultra Wide dia hanampy fifantohana mandeha ho azy ary heverina ho mihoatra ny zava-baovao nanampy dia antenaina fa ny famokarana iPhones isan-taona ho an'ny 2021 dia mitombo manodidina ny 12,3% isan-taona mahatratra hatramin'ny 223 tapitrisa ny singa vita. Olona tena ambony mandinika ny tontolon'ny areti-mandringana izay iainantsika ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Ny iPhone 13 dia manana 512GB farafahakeliny
Afaka nampatahotra ny varotra ny iPhone 13 noho ny anarany